ICarbidopa kunye nelevodopa
Igama lesiqhelo: I-carbidopa kunye nelevodopa (KAR bi DOE pa kunye neLEE voe DOE pa)
Igama lebrand: I-Rytary, iSinemet, iSinemet CR
Iifom zedosi: Iphilisi yomlomo, ukukhutshwa okwandisiweyo (23.75 mg-95 mg; 36.25 mg-145 mg; 48.75 mg-195 mg; 61.25 mg-245 mg); ithebhulethi yomlomo (10 mg-100 mg; 25 mg-100 mg; 25 mg-250 mg); ithebhulethi yomlomo, ukwahlukana (10 mg-100 mg; 25 mg-100 mg; 25 mg-250 mg); ithebhulethi yomlomo, ukukhutshwa okwandisiweyo (25 mg-100 mg; 50 mg-200 mg)
Udidi lweziyobisi: Dopaminergic antiparkinsonism arhente
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngoMeyi 3, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
Yintoni icarbidopa kunye nelevodopa?
ICarbidopa kwaye ilevodopa liyeza elidibeneyo elisetyenziselwa ukunyanga iimpawu ze Isifo sikaParkinson , njengokuqina okanye ukungcangcazela.
ICarbidopa kunye nelevodopa ikwasetyenziselwa ukunyanga iimpawu zeParkinson ezibangelwa yicarbon monoxide ityhefu okanye ukunxila kwe manganese.
ICarbidopa kunye nelevodopa inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Musa ukusebenzisa i-carbidopa kunye ne-levodopa ukuba usebenzise i-MAO inhibitor kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo, ezifana ne-isocarboxazid, yomgca , imethylene eluhlaza okwesibhakabhaka isitofu, phenelzine , okanye lwenyathi .
Akufanele ulisebenzise eli chiza ukuba uxabisa i-carbidopa okanye i-levodopa, okanye ukuba une:
ikona emxinwa iglaucoma .
Sukusebenzisa eli yeza ukuba usebenzise i-MAO inhibitor kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo. Ukudibana okuyingozi kweziyobisi kunokwenzeka. Ii-inhibitors ze-MAO zibandakanya i-isocarboxazid, linezolid, inaliti eluhlaza okwesibhakabhaka, i-phenelzine, i-tranylcypromine, kunye nezinye.
isifo sentliziyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, okanye ukuhlaselwa yintliziyo ;
isifo se-endocrine (hormonal);
umbefu , isifo esinganyangekiyo semiphunga ( ICOPD ), okanye esinye isifo sokuphefumla;
isisu okanye isilonda samathumbu;
glaucoma evulekileyo; okanye
ukudakumba, ukugula ngengqondo, okanye isifo sengqondo.
Ithebhulethi eyahlulayo inokuba ne-phenylalanine. Tshela ugqirha wakho ukuba unayo phenylketonuria (IPKU).
Abantu abanesifo sika-Parkinson banokuba nomngcipheko ophezulu womhlaza wolusu (i-melanoma). Thetha nogqirha wakho malunga nalo mngcipheko kwaye zeziphi iimpawu zolusu ekufuneka uzijongile.
Ndingayithatha njani icarbidopa kunye nelevodopa?
Ukuba sele uthathe i-levodopa, kufuneka uyeke ukuyithatha okungenani iiyure ezili-12 ngaphambi kokuba uqale uthathe i-carbidopa kunye nelevodopa.
ukutya okunokuphetshwa sisisu
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho yonyango kwaye ufunde zonke izikhokelo zamayeza okanye amaphepha emiyalelo. Ugqirha wakho ngamanye amaxesha unokutshintsha idosi yakho. Sebenzisa iyeza ngokuchanekileyo njengoko kuyalelwe.
Thatha i-carbidopa kunye nelevodopa rhoqo, kunye okanye ngaphandle kokutya.
Ginya ifayile ye- philisi iphelele kwaye ungayityumzi, uyihlafune, uyiqhekeze, okanye uyivule.
Ithebhulethi ngamanye amaxesha iphulwe kwisiqingatha ukunika idosi echanekileyo. Soloko uginye ipilisi epheleleyo okanye enesiqingatha ngaphandle kokuhlafuna okanye ukutyumza.
Beka ithebhulethi yokuqhekeka ngomlomo emlonyeni wakho kwaye uyivumele inyibilike, ngaphandle kokuhlafuna.
Kungathatha ukuya kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba iimpawu zakho ziphuculwe. Qhubeka usebenzisa amayeza njengoko kuyalelwe kwaye uxelele ugqirha ukuba iimpawu zakho aziphucuki. Xelela ugqirha wakho ukuba iziphumo zeli yeza ziphela ngokukhawuleza phakathi kweedosi.
Ukuba usebenzisa eli yeza ixesha elide, unokufuna uvavanyo rhoqo lonyango.
Eli yeza linokuchaphazela iziphumo zovavanyo ezithile zonyango. Xelela nawuphi na ugqirha okunyangayo ukuba usebenzisa i-carbidopa kunye nelevodopa.
Ungayeki ukusebenzisa i-carbidopa kunye ne-levodopa ngequbuliso, okanye unokuba neempawu ezingathandekiyo zokurhoxa. Buza ugqirha wakho ukuba ungayeka njani ngokukhuselekileyo ukusebenzisa eli yeza.
Yintoni endifanele ndiyiphephe ngelixa ndithatha icarbidopa kunye nelevodopa?
Gwema ukuqhuba okanye ukwenza umsebenzi oyingozi de ube uyazi ukuba icarbidopa kunye nelevodopa ziya kukuchaphazela njani. Ukuphendula kwakho kunokungahambi kakuhle. Gwema ukuphakama ngokukhawuleza kwindawo yokuhlala okanye yokulala, okanye unokuziva unesiyezi.
Gwema ukuthatha izongezo zentsimbi okanye ukutya ukutya okuneproteni eninzi. Ezi zinto zinokwenza kube nzima kumzimba wakho ukugaya kunye nokufunxa i-carbidopa kunye nelevodopa. Thetha nogqirha okanye ugqirha wakho malunga nokutya okusemgangathweni ukutya okanye ukuphephe.
Iziphumo zeCarbidopa kunye nelevodopa
ukwanda kweenyikima (ukungcangcazela okungalawulwayo);
ezinzima okanye eziqhubekayo ukugabha okanye urhudo ;
ukudideka, ukubona izinto ezingekhoyo, utshintsho olungaqhelekanga kwiimvakalelo okanye ekuziphatheni;
uxinzelelo okanye iingcinga zokuzibulala; okanye
ukusabela kwenkqubo ye-luvo-izihlunu eziqinileyo (eziqinileyo), umkhuhlane omkhulu, ukubila, ukudideka, ukubetha kwentliziyo okukhawulezayo okanye okungalinganiyo, ukungcangcazela, ukuziva ngathi ungaphuma.
Abanye abantu abathatha i-carbidopa kunye ne-levodopa balale ngexesha lemisebenzi eqhelekileyo yasemini njengokusebenza, ukuthetha, ukutya okanye ukuqhuba. Tshela ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na ingxaki ngokulala emini okanye ukozela.
Unokonyusa iminqweno yesini, iminqweno engaqhelekanga yokungcakaza, okanye eminye iminqweno enkulu ngelixa uthatha eli yeza. Thetha nogqirha wakho ukuba oku kuyenzeka.
Ungaqaphela ukuba ukubila kwakho, umchamo, okanye amathe avela mnyama ngombala, njengombala ubomvu, mdaka, okanye mnyama. Esi ayisosiphumo esibi secala, kodwa sinokubangela ukucoceka kweempahla zakho okanye iishiti zokulala.
iintshukumo zemisipha ezijijekileyo okanye ezijijekileyo;
intloko ebuhlungu , isiyezi ;
uxinzelelo lwegazi oluphantsi (Ndiziva ndikhaphu-khaphu);
iingxaki zokulala, amaphupha angaqhelekanga;
izihlunu zezihlunu; okanye
isicaphucaphu , ukugabha, ukuqhina .
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-carbidopa kunye nelevodopa?
Amanye amachiza anokuchaphazela i-carbidopa kunye nelevodopa, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nalo naliphi na iyeza oqala okanye uyeke ukulisebenzisa.
Ngaba iCarbidopa / levodopa iyanxibelelana nezinye iziyobisi?
Ipilisi emhlophe ejikelezayo 4839 v
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 13.01.
Ndingayithatha kangaphi ibuprofen 600
idosi ye-doxepin yokulala
Uyenza njani into yokuthelekisa ilitye elibomvu
Chaza isithethi sendlu